Tag: nkwekọrịta ọrụ ọkwa | Martech Zone
Kpido: nkwekọrịta ọkwa ọrụ
Ajụjụ 15 I Kwesịrị Askjụ Banyere API Ha Tupu Selecthọrọ Nhazi
Wednesday, December 30, 2020 Tọzdee, Machị 4, 2021 Douglas Karr
Ezigbo enyi na onye ndụmọdụ dere m ajụjụ ma chọọ m iji azịza m maka post a. Ajụjụ ya dị ntakịrị ilekwasị anya na otu ụlọ ọrụ (Email), yabụ akọwapụtara m azịza m niile na API niile. Ọ jụrụ ajụjụ ndị ụlọ ọrụ kwesịrị ịjụ onye na-ere ha banyere API ha tupu ha ahọrọ. Kedu ihe kpatara I ji chọọ API? Ngwa mmemme mmemme (API) bụ interface nke sistemụ kọmputa, ọba akwụkwọ,